Somaliland: Nuxurka Kulanka Maanta Qasriga Madaxtooyada Go,am Lagag Gadhayo Dekedda Berbera - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Nuxurka Kulanka Maanta Qasriga Madaxtooyada Go,am Lagag Gadhayo Dekedda Berbera
Ilo wareedyo Rasmi ah ayaa Wargeyska Waaheen u xaqiijiyey in xukuumadda Somaliland wada hadal la fureyso shaqaalaha dekeda Berbera oo maalintii saddexaad wada shaqo joojin ay ku talaabsadeen kadib markii ay waayeen Gunnooyin ay ka qaadan jireen Koontiinarada kasoo daga dekeda Berbera.
Xukuumadda Somaliland ayaa Ergo u dirtay shaqaalaha shaqo joojinta Sameeyey si ay is afgarad uga gaadhaan tabashadooda,hase’yeeshee waxa la sheegay inay ku gacan saydheen taasoo keentay in madaxtooyadu ugu baaqdo inay guddi iska soo saaraan kuwaas oo wada xajood ay la furi doonto xukuumaddu.
Warka ayaa shegay ain ay shaqaalaha shaqo joojinta sameeyey ay aqbaleen isla markaana y guddi iska soo dhex saareen,kuwaas oo xalay kasoo baxay magaalada Berbera kuna soo jeeda magaalada Hargeysa isla markaana wada hadalka la furi doona madaxda sar sare ee xukuumadda.
Shaqaalaha dekeda Berbera ayaa barkulan ka samaystay meel u dhaw dekeda,halkaas oo ay isugu yimaadaan isla markaana ku lafa guraan go’aanka ay qaateen sidii ay u xoojin lahaayeen,waxaana ay maalintii saddexaad joogteeyeen shaqo joojintii ay sameeyeen.
Xukuumadda Somaliland ayaa si rasmi ah dekeda Berbera ugu waareejisay shirkada Dp World,halkaas oo aan ilaa hadda la ogayn xubnihii Somaliland u matali lahaa maamulka dekeda Berbera.
Isku dhaca dhex maray masuuliyiinta shirkada Dp World iyo shaqaalaha Dekeda ayaa ka dhalatay dayac ka yimi dhinaca xukuumadda Somaliland,waxaana isa soo taraya maamul xumada ka taagan heshiiska ay Somaliland la gashay shirkada Dp World.
Shaqaalaha dekeda Berbera
Somalia: Al-Shabab attack on Somali city leaves several dead